Charlie St. Cloud ( 2010 ) - Myanmar Asian TV
Drama , Fantasy ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ခုနောက်ပိုင်း အခွီကားတွေပဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရိုက်နေတဲ့ မင်းသား Zac Efron ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ …
ဇာတ်ကားအကျဉ်းကတော့ – ချာလီနဲ့ဆမ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကို၂ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ဝါသနာကို တစ်ယောက်ကလိုက်ကူညီပြီး အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ညီအစ်ကို၂ယောက်ပါ …
တစ်နေ့ ချာလီက အထက်တန်းကျောင်းက ရွက်လွှင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ကောလိပ်ဆက်တက်ဖို့ ပညာသင်ဆုရခဲ့တယ် … အဲဒီနောက် ချာလီက ကျောင်းသွားတက်ဖို့ စောင့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘဲ သူတို့ညီအစ်ကို၂ယောက်ဆီကို ကံကြမ္မာဆိုးတစ်ခုက ရောက်လာခဲ့တယ် …
အဲဒါကတော့ သူတို့အမေ အိမ်မှာမရှိတုန်း ညီအစ်ကို၂ယောက် ညဘက်အပြင်ခိုးထွက်ကြရင်း ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ခဲ့တယ် … ဆမ်ကသေသွားပြီး ချာလီကတော့ အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တယ် … ဒါပေမယ့် ချာလီက ဆမ့်ကို မြင်ခွင့်ရခဲ့တယ် … နောက်ပိုင်း ချာလီက ပညာသင်ဆုတွေရော အားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး သုဿန်မှာအလုပ်လုပ်ရင်း ဆမ် နဲ့ ညနေ တိုင်း ကစားခဲ့တယ် …
နောက်ပိုင်း ချာလီဘဝထဲကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဝင်လာခဲ့တယ် … အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ချာလီ နဲ့ ကောင်မလေးကြား ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ?
ချာလီ က သူ့ညီနဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကိုရွေးရမယ့်အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့လဲ ? ဆိုတာကိုတော့ Charlie St.Cloud ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရအောင်နော် …
Rating အရ IMDb မှာ 6.5/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ …
Openload.co Myanmar720 MB Download Soliddrive.co Myanmar720 MB Download
Trailer: Charlie St. Cloud ( 2010 )